Nagu saabsan - Shanghai West Bridge Inc. Co., Ltd.
Raadinta tayo kaamil ah iyo abuurista summad caalami ah
Dib-u-nooleynta qaybaha gawaarida midna u adeeg hal suun, hal waddo
Is-dhexgalka silsiladda warshadaha muraayadda gawaarida
Dhisida xarun warshadeed oo heer caalami ah
Dadku waxay u janjeedhaan, ganacsi, wax wada qabsi iyo guuleysi guul
Jooji qashinka oo ku dadaal heer sare
Fikradaha Hay'adda Ganacsiga:
Leh karti iyo hufnaan siyaasadeed labadaba
Shanghai West Bridge Inc. Co., Ltd. waxaa la aasaasay 2011. Ku dhowaad 10 sano oo khibrad ah soo saarista muraayadda gaari xamuul ah. Laga soo bilaabo horumarka, wax soo saarka ilaa iibinta, si ay u siiso macaamiisha adeeg hal-joogsi ah, waxay leedahay koox aad u fiican oo ka caawisa macaamiisha horumarka iyo wax soo saarka.
Waxyaabaha Our dabooli dalka oo dhan iyada oo loo marayo network iib weyn iyo qanci macaamiisheena by si kaamil ah ka dib service.We yihiin horumarinta iyo ku darida wax soo saarka cusub nus sano kasta. Wax soo saarka waxaa inta badan loo dhoofiyo USA, Canada, Mexico, South America, Russia iyo European countries.Our wax soo saarka waxaa loo dhoofiyaa dalal shisheeye oo ku riyaaqay suuq rajo leh oo tayo sare leh, qiimaha tartan iyo adeeg wanaagsan. For the spare parts, all are kuwa asalka ah oo leh shahaadooyinka OEM, waxay dammaanad qaadayaan tayada iyo adeegga iibka kadib. Waxay noqon doontaa farxad noo ah inaan kuu soo qaadno qiimaha ugu fiican oo aan kuu fidino adeegga ugu fiican.
Qiyamka shirkadeena waa daacadnimo, dadaal, pragmatism, mahadnaq iyo altruism.Waxaan higsaneynaa inaan ka siino macaamiisha adduunka oo idil wax soo saarka ugu tayada fiican iyo qiimaha ugu tartanka badan. Si loo gaaro himiladaan, waxaan dejinay xakameyn tayo leh oo adag, kormeerid, maareynta ugu fiican iyo nidaam saad wanaagsan. si loo damaanad qaado tayada wax soo saarka, dhammaan warshadaha aan wada-jir iyo iskaashi la soo saar qaybaha auto si adag u ISO9001 / QS9000, shahaado tayo TS16949.
Shirkaddayadu had iyo jeer waxay u hoggaansantaa "tayada loo hoggaansamo, u hoggaansanaanta iimaanka wanaagsan" philosphys, ganacsigu wuxuu adeegsadaa ruux hal-abuur leh si uu u helo fiiro dheeraad ah iyo iskaashi ka yimaada asxaabteena. Waxsoosaarkayagu waa noocyo buuxa, qiimo aad u tiro badan, tayo sare leh, oo kor u qaada Waxaan diiradda saareynaa qiime macquul ah iyo gaarsiinta waqtiga-waqtiga ah.
Koonfurta Ameerika 25.00%
Waqooyiga Ameerika 20.00%
Bariga Dhexe 20.00%
Maanta macaamiisheennu waxay ka kala socdaan in ka badan 30 waddan oo aaminsan SWB's Products, ee Afrika, Aasiya, Koonfurta Ameerika, Yurub, Waqooyiga Ameerika iyo Bariga Dhexe iwm.
Waxaan aaminsanahay in shaqaaluhu aysan ahayn kaliya hantida ugu muhiimsan ee shirkadda, laakiin sidoo kale waa aasaaska aasaasiga ah ee shirkadda. Shanghai West Bridge Inc. Co., Ltd. waxay ahmiyad weyn siineysaa abuurista shaqo xiiso leh shaqaalaha isla markaana siisa meel ballaadhan oo horumarineed jawi firfircoon, cilmiyeed, xamaasad iyo furfuran.Waxaan hubineynaa in shaqaaluhu ay helaan macluumaad ku filan iyo xorriyad buuxda in la shaqeeyo si kartidooda ay si buuxda uga miro dhaliso. Isgaarsiinta iyo tababarku waa waxyaabaha aasaasiga u ah dhaqankeenna maamul. Marka sidaas la sameynayo, waxaan aaminsanahay in dadku ay sameyn karaan isla markaana sameyn doonaan go'aanno sax ah oo ay qaban karaan shaqo wanaagsan.Waxaan ku dadaalnaa inaan la kulanno baahiyaha shaqaalaheenna iyada oo loo marayo wadahadal abaabulan iyo jawaab celin ku saabsan waxqabadka shaqsiyeed iyadoo lala kulmayo shuruudaha ganacsi ee mustaqbalka. Waxaan u siineynaa shaqaalaheena fursado horumarineed waxaana ka rajeyneynaa inay masuuliyad iska saaraan horumarintooda shaqsiyadeed. Tababbarka saxda ah iyo horumarka ayaa muhiim u ah guusha muddada-dheer ee shirkadda iyo shaqaalaheeda.Waxaan ku dadaalnaa inaan siino fursado shaqo oo kala duwan oo dabacsan oo u dhigma baahiyaha shaqsiga, waxaana aaminsanahay abuurista dheelitirnaanta shaqada iyo nolosha shaqsiga ah. Shirkaduhu waxay fahansan yihiin in xaaladaha shaqada ee laga filayo ay ku kala duwan yihiin heerarkooda nololeed iyo himilooyinka shaqsiyadeed.
Waxaan ku dhiirigelinaynaa shaqaalaheena inay noqdaan kuwo firfircoon, hal abuur leh, oo wax dhisid leh u babac dhigaya habka aan u shaqeyno, maxaa yeelay xiisaha iyo geesinimada ayaa dadka ku dhiirrigelin kara inay ogaadaan habab cusub oo loo shaqeeyo.
Shanghai West Bridge Inc. Co., Ltd. had iyo jeer waxay raadisaa koritaanka guud ee ururka iyo shaqaalaheeda, iyaga oo siinaya jawi shaqo oo wanaagsan, fursado badan oo horumar xirfadeed ah, tababar hodan ah iyo fursado isweydaarsi caalami ah.
Iyadoo loo marayo qiimeynta boostada iyo dejinta tilmaamaha waxqabadka ee shaqaale kasta, Shanghai West Bridge Inc. Co., Ltd. waxay siisaa shaqaalaha xilal cad iyo shuruudo cad, waxay ku dhiirrigelisaa shaqaalaha inay ka adkaadaan caqabadaha leh xirfad-yaqaannimo, dhammaystiraan howlahooda u gaarka ah, rajo wanaagsan iyo ganacsi , ku dhiiran inuu masuul noqdo, kuna gaaro horumar xirfadeed barasho iyo ku celcelin joogto ah.
Shanghai West Bridge Inc. Co., Ltd. waxay u ololeysaa iskaashiga ka dhexeeya waaxaha iyo shaqaalaha iyadoo lagu saleynayo himilada midaysan iyo kalsooni buuxda, waxay dhistaa faa'iidooyinka shirkadda ee faa'iidooyinka kooxeed, waxay dhiirrigelisaa wadaagga macluumaadka ee shaqaalaha dhexdooda, waxay dejisaa xiriir wanaagsan oo wada shaqeyn, waxayna aqoonsataa waxtarka dadka kale shaqada.